International Real estate magweta muNetherlands - Law & More
Mutemo wekutengesa zvivakwa unosanganisira zvese zviri pamutemo zvine chekuita nepfuma isingazungunusike. We at Law & More unokwanisa kukubatsira nezano repamutemo kana mibvunzo kana mhirizhonga ikamuka nezvekutenga nekutengesa kwezvinhu zvisingazununguke. Pamusoro peizvozvo tinogona kukupa iwe zano repamutemo paminda yemutemo wekuvaka nemutemo werenda.
UNOFANIRA KUGADZIRA MUTEMO WEMAHARA KUVANZIRA?
DANA MUZVINHU ZVINOKOSHA MUTEMO MUTEME
> Mutemo wekuvaka
> Mutemo weRental
> Kutenga kwekugara kwebhizinesi
Sewemabhizimusi mukati mechikamu chekuvaka iwe unoshanda pamwe nemapati mazhinji akasiyana. Vakuru, vavaki uye makondirakiti vanofanirwa kuratidza zvakajeka kugadzwa, nekuti zviitiko zvemumwe nemumwe mapato izvi zvine hukama. Nekuda kwekuwanda kwekudyidzana mukati megadziriro yekuvaka, bato yega yega inosungirwa kune zvinoverengeka zvisungo uye kodzero dzinoiswa pasi mukati memutemo. Nekuda kwekuoma kwekushandira pamwe, marudzi ese enyaya dzemutemo angamuka. Ndezvipi zvaunosungirwa uye kodzero dzako kune mumwe pati? Ndiani anogona kuve nemhosva kana paine kukuvara semhedzisiro yechikonzero chakarongeka. Law & More Inokwanisa kukupa zano repamutemo uye inogona kuora kana yapera kunodiwa.
Pamusoro pezvo, tinogona kukupa mazano pamusoro pemitemo yese yepamutemo izvo zvivakwa zvinofanirwa kutevedzera. Nenzira iyi matambudziko emutemo, pamusoro pechikwereti semuenzaniso, anogona kudzivirirwa zvakanyanya sezvazvinogona.
Munguva pfupi, tinogona kukupa, pakati pezvimwe zvinhu, nezviito zvinotevera:
• Kutemerwa kwekodzero dzako nezvisungo zvako semutambi mukati megadziriro yekuita;
• Ipa zano nezvematemu uye mamiriro ayo anovakwa inofanirwa kutevedzera;
• Rubatsiro kana ukabatwa nemhosva.
Law & More inobatsira vese varidzi uye varidzi vepamba pakudzivirira nekupedza matambudziko ari pamutemo. Vagadziri uye varidzi vepamba vane zvakakosha zvemitemo zvisungo. Izvi zvine hunhu hunodzora zvinoreva kuti mapato anogona kuvatsiva nezvibvumirano zvavo. Uye zvakare, pane zvekumanikidzwa zvinodiwa mukati memutemo werenda. Mumwe haakwanise kusiyana nemirau iyi, iyo inotungamira kuchengetedza muridzi sezvo iri bato risina simba, chibvumirano. Kana iwe uchinge wakamira mune imwe mamiriro umo mumwe wako asingateereri zvibvumirano zvake, pane zvinoverengeka zviito zvinogona kuedzwa. Mune zviitiko zvakadaro unogona kuvimba nesu nekukupa iwe zano repamutemo raunoda.
Mienzaniso yezvidzidzo zvatingakubatsira iwe:
• kunyorwa kwechibvumirano chekurenda kana iwe uri muridzi wemba ;;
• kupokana pamusoro petsananguro yesungano;
• kutora matanho kana muridzi kana muridzi wemba asingaite maererano nezvibvumirano zvakaitwa ;;
• kupera kwechibvumirano chekurenda.
Rent yekugara yebhizinesi
Kana uchida kushandira bhizinesi iwe uchada bhizinesi nzvimbo. Kana iwe uine chinangwa chekurenda bhizinesi pekugara, chibvumirano chekurenda chinofanira kunyorwa. Iko kune chaiyo yakatarwa mitemo pamutemo wekurenda kwebhizinesi pekugara. Zvatinogona kukubatsira iwe zvinotevera
• kuona mhando dzechibvumirano chekurenda uye kodzero dzinowirirana nezvisungo;
• kuraira muchiitiko chekuchinja kwemutengo;
• kuraira nezve clearance dziviriro.
Unokwezva chivakwa chinoyevedza here? Kana iwe uchida kubhadhara imba ino zvakafanira kuti uzive kana zviitwa zvaunovavarira ... kutevedzera zvinoyevedza zvakataurwa neruwa kune chivakwa. Law & More iri kurasa ruzivo rwekuronga matanho uye anokwanisa kuona kana nzvimbo iripo.
Kutenga kwekugara kwebhizinesi
Kana iwe urikuda kutenga imba yebhizimusi rako kana watova neyako, ipapo tinogona kukubatsira nezvedu zvinotevera zvidzidzo:
• kutaurirana kwechibvumirano chekutenga;
• tsananguro yesungano;
• kutyora chibvumirano nemuridzi wemba;
• kupera chibvumirano;
• mamogeji uye zvivakwa zvemari.